बजेटबारे बाबुराम उवाच : नहुने चुनावको एमाले घोषणापत्र
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि टिप्पणी गर्दै नहुने चुनावको एमाले घोषणापत्र भएको बताएका छन् ।
डा. भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत आगामी वर्षको बजेटलाई एमालेको घोषणापत्र भनेका हुन् । उनले नहुने चुनावका लागि एमालेले घोषणापत्र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलमार्फत सार्वजनिक गरेको बताए ।
बजेटले सिधासादा मतदातालाई ललिपप बाँडेको भट्टराईले बताए । उनले लेखेका छन्, 'अर्थमन्त्रीमार्फत वाचन गरिएको नहुने चुनावको एमाले घोषणापत्रमा कुनै संरचनात्मक परिवर्तनको छनक पाइएन । सिधासादा मतदातालाई ललिपप बाँडेको देखियो ।'
डा. भट्टराईले अर्थमन्त्री पौडेलले हिजो वाचनको बजेटमा राखिएको पपुलिज्ममा पनि खासै सिर्जनात्मकता नदेखिएको टिप्पणी गरे । बजेटमा पुरानै घिसेपिटेका नारा र कार्यक्रम भेटिएको उनको भनाइ छ ।
भट्टराईले बजेटले गोरखालाई नसमेटेको कुरापनि व्यङ्ग्यात्मक रुपमा लेखेका छन् । उनले लेखका छन्, 'एउटै नयाँ कुरा एमालेले गोरखामा कुनै उमेदवार नउठाउने बुझियो !'
प्रकाशित मिति : जेठ १६, २०७८ आइतबार ९:७:१६, अन्तिम अपडेट : जेठ १६, २०७८ आइतबार ९:९:३९